ရှင်းဆဲကိုင်း ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
အိုဆာကာ နံပါတ် ၁ အရမ်းပတာလမ်းလို့ ခေါ်တဲ့ အိုဆာကာရဲ့ သင်္ကေတ စွတ်တန်းတာဝါ ပတ်ဝန်းကျင် ( ကမ္ဘာသစ် ) ! အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ၊ အရောင်တောက်လွန်းတဲ့ နီယွန်မီးတွေ၊ တတ်တတ်ကြွကြွဖိတ်ခေါ်သံတွေနဲ့ဧကန်မုချ ( ဇ . အိုဆာကာ ) ကမ္ဘာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ အသားထုတ်ထိုးဆိုင်တွေလည်း များစွာရှိပါတာကြောင့် သွားဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
Ōsakafu ōsakashinaniwaku Ebisuhigashi
အနည်းငယ်အတွင်းကျတဲ့ မြောက်ဘက်နားမှာ စွတ်တန်းတာဝါကို တည်ဆောက်ထားပြီး အရှေ့ တောင်ဘက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ခုံလည်းဖြစ်တဲ့ ဂျန်းဂျန်းလမ်းကြားတွေ ရှိပါတယ်။ ရှောဝအစောပိုင်းခေတ်ကို ခံစားနိုင်မယ့် ခေတ်ဟောင်း ကျားထိုးကစားတဲ့နေရာနဲ့စမတ်ဘောဆိုင်တွေ တန်းစီရှိပါတယ်။
မြေအောက်ရထားလိုင်း ( Sakaisujisen ebisuchōဘူတာ ) မှ ၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်
ဟန်ခိုင်းလျှပ်စစ်ရထား Hankaidenki hankaisen `ebisuchōဘူတာ မှ ၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်
ရှိဘစုမြေအောက်ရထား ( Ebisumachi ) မှ ၃ မိနစ် လမ်းလျှောက်